Anisan’izany ao amin’ny tsenan’i Soamanatombo. Tsy maintsy manaraka ny toromarika avokoa ny mpivarotra rehetra ao anatin’ny tsena ka ny lehiben’ny tsena mihitsy no manara-maso izany. Ho an’ireo minia mandika ny lalana moa dia fantatra fa handraisana fepetra manokana izy ireny. Ankoatra ny tsena tahaka itony dia fantatra fa tsy maintsy mikatona amin’ny 12 ora atoandro ihany koa ny toeram-panasan-damba na ny bassin ho an’ny daholobe, ny paompim-pokonolona…. Ho an’ny fitaterana indray dia tsy mahazo mitatitra olona ny sarety fa voasazy avy hatrany raha vantany vao tratra.